Sara Gutierrez. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Oge Ikpeazụ nke USSR | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela
Kpuchie foto: site n'ikike nke Sara Gutiérrez.
Sara gutierrez Ọ bụ ophthalmologist, mana ọ na-edekwa edemede site na edemede na akụkọ. Ọ na-agbakwa ụlọ ọrụ Ingenio de Comunicación, ya na Eva Orue. Ugbu a, o gosipụtawo akwụkwọ ọgụgụ, nke mbụ, nke isiokwu ya Oge ikpeazụ nke USSR. Na nke a Ajụjụ ọnụ Ọ na-agwa anyị banyere ya ma na-agwa anyị banyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ana m ekele gị nke ukwuu maka oge na obiọma ị nyere m.
Sara Gutiérrez - Ajụjụ ọnụ
NKWUKWU: Akwụkwọ ọhụrụ gị bụ Oge ikpeazụ nke USSR. Kedu ihe ị gwara anyị n'ime ya?
SARA GUTIERREZ: Nke ikpeazu na nke mbu, rue ugbua ihe m dere bu edemede ma obu akuko buru ibu.
Oge ikpeazụ nke USSR bụ a akụkọ dabere na njem m mere site na ala Soviet, site n'Oké Osimiri Baltic ruo Oké Osimiri Ojii, n'ime izu mbụ nke July 1991, ọnwa ole na ole mgbe Soviet Union nwụsịrị.
Otu nke amalitere dị ka njem njem ndị ọzọ bịara bụrụ nke ahụmahụ pụrụ iche kwesiri ka ekekọrịta, tumadi ekele maka ihe abụọ: nke mbụ, onye ibe m, onye otu onye Uzbek nke na-emebeghị njem ọ bụla maka ime nke a ma ọ bụ hụ oke osimiri ma ọ bụ detụ nnwere onwe, na onye na mbụ achọghị m ka ọ soro m; na nke abụọ, ụgbọ oloko abalị, ndị a manyere anyị site n'ọkwa agụmakwụkwọ m na USSR (nke gbochiri m ịgagharị na-enweghị ikike pụrụ iche ma ọ bụ nọrọ na họtel) na nke anyị na ndị mmadụ na ụdị ọ bụla dị njikere ikwu maka Chukwu na mmadụ.
Na echiche nke oge, na ụbọchị na-ejegharị site obodo anyị na-eletaLeningrad na-agagharị, Tallinn, Riga, Vilnius, Lvov, Kiev y Odesa, malite na Kharkiv):: Ihe mgbochi na Riga, oké ọrụ okpukpe na Lvov, ngosipụta nnwere onwe nke anyị sonyere na Kiev, dịka ọmụmaatụ, bụ ndepụta nke akara ngosi banyere oge gafere n'oge ahụ.
Na akụkọ banyere njem ahụ, a ga-etinye ọnụ Mbipụta nke ndụ kwa ụbọchị afọ abụọ gara aga nke USSR (abịarutere m mba ahụ na Nọvemba 1989 iji bụrụ ọkachamara na ophthalmology) yana afọ 5 mbụ nke nnwere onwe nke nnwere onwe na mba ndị mejupụtara (M bi na Russia ruo July 1996).
E mechara akwukwo a ihe atụ magburu onwe ya nke Pedro Arjona, na ụfọdụ foto na akwụkwọ banyere njem eze, na mbipụta mara mma nke Reino de Cordelia.
SG: Echere m na akwụkwọ mbụ m gụrụ bụ Adventure na ndagwurugwu nke Enid Blyton na, emesia, ihe omimi nile nke nwegoro na nke otu a
Ọ bụrụ na m si na ebe nchekwa, ihe m na-echeta dị ka edemede mbụ ụfọdụ love poems n'oge uto.
SG: Nke izizi ... enweghị echiche. M chetara na m na-atụ anya ya n’ịpịa ụlọ ahịa akwụkwọ Ima ima ke ini udọn̄ọ maka nnukwu uto n'ọnụ m nke hapụrụ m Afọ isii nke owu ọmụma ikekwe n'ihi na otú ezi uche García Márquez si magical n'ezie bụ m. Na, n'etiti, m na-echeta omiiko enyefe m onwe m na Rayuela nke Cortázar.
AL: Onye edemede kachasị amasị gị? Ha nwere ike ị karịrị otu na oge niile.
SG: Abụ m nnukwu onye ofufe nke ọchị, m na-agbalị ka m ghara ịhapụ ihe ọ bụla Joe sacco.
SG: Ọ ga-amasị m izute Sherlock Holmes, na isoro ya na-arụ ọrụ n'ọfịs nke ọkachamara anya m Dr. Conan Doyle. Echere m na ọ ga-abụrịrị ihe na-akpali akpali maka m ịmepụta Frankenstein.
SG: M na-aga ikwu na ọ dịghị, ma ugbu a, m na-eche banyere ya Mgbe m na-agụ ma ọ bụ dee dina ala, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala jiri ụkwụ gị gbatịa elu, zuru ike.
SG: La Morningtụtụ Sọnde, n'ihe ndina. Gụ ihe n’elu oche oche nke chere ihu n’oké osimiri bụkwa nnukwu ihe obi ụtọ.
SG: Ihe kachasị m mma ọchị na nwalee.
SG: Ana m agụ Ozioma nke igha site Patrik Svensson (Asteroid Akwụkwọ, 2020). Ana m eche banyere akụkọ banyere njem ọzọ.
AL: Kedu ka ị chere na mbipụta akwụkwọ ahụ sitere n'ọnọdụ gị n'otu otu ị mebere na Ingenio de Comunicación?
SG: Ikwu okwu n’ozuzu siri ike ma dị egwu, ma na-arapara na akụkụ nke ngalaba nke m na-akọ, echere m na ọ na-arụsi ọrụ ike, na-eto ma na-achọ ụzọ ọhụrụ iji mee ka akwụkwọ dị mkpa dị ka nke a, na-atụgharị ha ọbụnadị n'ime ihe nke ọchịchọ, ma na-etinyekwa aka na ụlọ ahịa akwụkwọ.
SG: Oge anyị bi na ya bụ dị nnọọ ikeMana enweghị m obi abụọ ọ bụla na ọ bụrụ na ihe fọdụzie, ọ ga-abụ nke kachasị njọ n’ikpeazụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Sara Gutierrez. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Oge Ikpeazụ nke USSR